jeudi, 29 novembre 2018 15:27
Ambatondrazaka: Tsy nandre fanambaran’ny HCC ny voka-pifidianana filoham-pirenena
Tsy naheno ara-dalana ny voka-pifidianana ofisialy ny mponin’Ambatondrazaka noho ny fisian'ny delestazy tao anatin'ny fotoana namoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) ny didim-pitsarana.
jeudi, 29 novembre 2018 15:25
Antsirabe: Hampiantrano ny fankalazana ny fanombohan'ny taom-pianarana 2018-2019
Hotanterahina rahampitso zoma 30 novambra ny lanonana mahakasika izany, ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
jeudi, 29 novembre 2018 15:24
Maintirano: Mampitaraina ny olona ny jiro
Tato anatin'ny roa herinandro izao no miafina anaty tsy fahampian'ny herinaratra ny eto an-drenivohitry ny faritra Melaky. Raha mba misy indray anefa dia ambany ny tanjany, tsy mahazaka ampandehanana vata fampangatsiahana akory. Ahiana hoy ny mpiasan'ny fahasalamana ny hahasimba ny vaksiny tehirizina. Mitaraina koa ireo mpivarotra sy ireo manao asa fihariana mampiasa herinaratra.
jeudi, 29 novembre 2018 15:16
Fahasalamana : 21%-n'ny Malagasy no mampiasa sira misy ioda
Singa ilain'ny vatan'ny olombelona hisorohana aretina fivontosana toy ny goatra ny ioda. Misy hetsika tanterahina eo anoloan'ny Gara Fianarantsoa ho fanentanana ny olona ny fampitahana sira misy ioda, miaraka famelabelarana sy torohevitra ara-pahasalamana samihafa tamin'ity anio ity, mifanandrify indrindra amin'ny Andro natokan'ny Firenena Mikambana ho amin'ny fampiasana ny sira misy ioda.
Boulevard Ratsimandrava Soanierana (RN7): Taxi-be zotra F nitsikasina tao anaty arabe
Olana ara-teknika teo amin'ny familiana no voalaza fa nitarika ny loza. Nitondra mpandeha hiazo an'Ambohijanaka ity taxi-be ity no izao tra-doza izao, maro ireo mpandeha tao anatiny naratra.
jeudi, 29 novembre 2018 13:35
Anjozorobe: Takalonaina telo avotry ny Tafika
Nitrangana asan-dahalo mitam-basy tao amin'ny Kaominina Marotsipoy ny herinandro lasa iny. Omby miisa 210 no lasan'ireo dahalo, naka takalonaina efa-mianaka izy ireo niaraka tamin'izay.
Nanao fanarahan-dia ny Fokonolona sy ny Miaramila avy amin'ny DAS (Détachement Autonome de Sécurité). Tafaverina ireo omby fa nentin'ireo dahalo nanaraka azy kosa ireo takalonaina.
Niantso tohana sy.fanomezan-tanana ireo miaramilan'ny DAS. Niditra an-tsehatra nanampy ny namany ny Tafika manao fampandriantany, anatin'ny "opération Manda 2018".
Avotra ny marainan'ny talata teo ny telo tamin'ireo takalonaina, maty notifirin'ny dahalo ny fahaefatra izay efa zokiolona. Dahalo enin-dahy azo sambo-belona ary efa natolotra ny.Fitsarana. Mitohy ny fikarohana ireo namany.
jeudi, 29 novembre 2018 12:21
Vakinankaratra: Voa mafy ianao ry Zandry
Anisan'ny be vato indrindra manerana ny Nosy i Vakinankaratra, ary malaza fa fief n'i Dada. Noravaravany mihitsy ianao manerana ny Distrika.
Mbola betsaka anefa ireo tsy tonga nifidy indrindra fa ny ao Antsirabe 1 sy 2, Betafo, Ambatolampy.
Antanifotsy nanao vato fotsy be indrindra, azo jerena.
Mahereza, ovaina kely ny resaka fa ny olona any terre à terre, tsy dia tia resaka cinéma sy bling bling.
QG: Tandremo miady an-trano
Rehefa 2ème tour ohatran'io dia miazakazaka daholo ireo olona nanohana ny kandida resy rehetra manantona ireo kandida tafiakatra.
Misy kosa ireo Kandida mihitsy no miantso, indrindra fa ireo kandida resy mba hanohana azy.
Tsy latsadanja koa etsy ankilany ireo Député, na ireo te hilatsaka Député, na te hanao maire, no misaringotra amin'ny kandida, sitrany ahay ahazo financement hoe anaovana propagandy ilay kandida, fa ny tanjony mba hitety tanàna anomanany ny azy ihany koa.
Vaky saritaka eo ny QG rehetra, satria maro ireo mpikatroka efa namono tena tamin'ny 1er tour, izay sady tsy nahazo ininona fa miasa jamba rafozana eo fotsiny. Miakatra eo ny fimonomononana, hoe olona adve tery ve no hiseho anivatsiva sy hiseho hitarika eto.